Indlela ukuqhuba ICO e Switzerland - Blockchain News
Safunda ukusuka Swiss yabameli Goldblum and Partners, ukukhonza abaququzeleli bale ICO, indlela engcono basebenzisane kubatyali yaseYurophu yaye liququzelele umqondiso e Switzerland.
Kutheni abantu abaninzi becinga ngokubamba ICO e Switzerland
Inxenye oku irhafu ukuya fashion – Ethereum Foundation, Tezos, ukukhutshwa, Lykke wenza Switzerland ethandwa ekuhlaleni crypto, kunye Zug yindawo elihle ukubhalisa inkampani ngenxa lula koluntu lonke kulawulo kunye kwerhafu.
Abaphathi isixeko yamkela bitcoins njengoko intlawulo yerhafu ukuya 200 franc. Ubhaliso le nkampani nako kuthwalelwa phandle kunye nokuqaliswa kwe BTC kwi eyinkunzi egunyazisiweyo; ulawulo lwerhafu iqwalasela crypto-iimali njengoko ipropati kwaye lisebenza ngokufanelekileyo irhafu.
Supervision, imisebenzi qondisa, imfuneko yokuba umlawuli wendawo lubekwe onoxanduva umsebenzi nkampani okanye ingxowa-mali, ukwenza Switzerland zithembeke kubatyali-mali, liqondwe abaququzeleli ICO kwaye zithene imigulukudu.
Ngelo isanda, sincoma ukuba abaququzeleli ICO khangela ukuba amahlakani ngubani na imali isixa esikhulu semali. Ukwengeza, ufuna ukuqhuba Ngokuzimisela okukhulu imibono, ukudala nohlelo le projekthi leyo eya kuba yinxalenye White Paper, nokuphuhlisa ngokoMthetho zokukhulisa imali ngohlobo kwiikota kunye nemibandela, kwaye uhlole iinkcukacha kwi izixhobo zokwazisa kunye iprizenteyishini lokuthobela.
Kukho amathuba eliphezulu okufumana umtyali-mali kwinkqubo ebizwa njalo-Umboniso ojikelezayo, leyo ebandakanya lokuthumela ngaphandle iziphakamiso intlanganiso, ebambe iintetho, ukuphendula zimali’ imibuzo kunye, nje ngeziphumo, abafumana imali. Oku ingongoma ebalulekileyo emsebenzini – ukuphendula imibuzo kakhulu olukhohlisayo, ubuso ngobuso, akukho mbuzo yokufihla iyeza apho.
Ngesivumelwano kunye nabaququzeleli, kwesi sigaba singakwazi ukubonelela igqwetha ukuba upapasho umcebisi le projekthi, kwaye uphendule imibuzo ngokusemthethweni ICO kubaxhasi.
Emva zimali ezinkulu zifumaneka, sincoma kokuqala nokubhaliswa nkampani: i-analogue LLC nge-mali ngokomthetho ka 20,000 franc, Cjsc – 100,000 franc. Kwimeko yesibini, zonke zabelo abaziwa. Kwakhona kuyenzeka ukuba bathenge inkampani esele zenziwe. ngaxeshanye, isicelo esemthethweni senzelwa imfuneko lweelayisensi ukuya umlawuli, lokuvula akhawunti kwimigangatho ucwangcise ulwamkelo mali bezimali ezincinane.
Yonke ingeniso efunyanwa kwezi zigaba zixhomekeke ukurhafa ekupheleni kwethuba lokunika ingxelo, kwaye akukho umahluko ukusuka kumsebenzi abasemagunyeni irhafu kwamanye amazwe.
Ingaba kuyimfuneko ukwenza ingxowa ICO e Switzerland ?
Njengomgaqo, mali imibutho oluqhelekileyo ezisebenzisa iminikelo okanye amalizo ezinye iinkqubo na ezinxulumene nemisebenzi yorhwebo kwaye musa baxhamle kulo msebenzi.
Kwakhona: ingxowa-mali kubonisa nawuphi na umsebenzi yorhwebo, ukufumana imali bezimali kunye nokuhlawula nabo emva ngomvuzo.
Ibali TEZOS, abaququzeleli awo baye bafumana naziphi na iingcaciso ezivela amagqwetha eSwitzerland kunye mali eyamkelweyo evela abatyali ngohlobo iminikelo, ngabom okanye – ke ukuba kucaciswe izilingo ezininzi, ebonisa ngokucacileyo imfuno ukubandakanya igqwetha kuzo zonke izigaba omabini amacala. Jonga iingcali ngubani oya kujongana iingcebiso okanye izenzo zabo.
Linganisa co-ngumseki & amp ...
Post Previous:Blockchain News 31 EyoMqungu 2018
Post Next:Iziveliso chips .GOKO ukusuka Samsung